Kumiswe othisha abayisithupha ngezinsolo zokuhlukumeza abafundi ngokocansi | Isolezwe
Kumiswe othisha abayisithupha ngezinsolo zokuhlukumeza abafundi ngokocansi
Izindaba / 13 September 2017, 10:18am / BONISWA MOHALE
KUMISWE othisha abayisithupha nonogada esifundeni iKing Cetshwayo (eMpangeni) ngamacala okuhlukumeza abafundi ngokocansi nokubashaya.
Isolezwe lithole ukuthi abanye othisha babhekene namacala okudlwengula, awokuthinta abafundi ebuntwini babo, awokuzama ukudlwengula nawokubabhaxabula.
Lokhu kudalulwe nguMnuz Muzi Mahlambi oyisikhulu sezokuxhumana eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal izolo.
UMahlambi uthe othisha abasolwa ngokuhlukumeza izingane ngokocansi basezikoleni eZithume, Zinqobele, Manqamu naKwaDlangezwa.
Uthisha oshaye ingane useMdlamfe Secondary, eSikhaleni.
“UMnyango uphoxeke kakhulu ngokuhlukunyezwa ngokocansi kwabafundi ngoba abantu abenza lo mkhuba yibo qobo okumele ngabe bavikela abafundi - othisha.
“Ungqongqoshe (Mthandeni Dlungwane) ulusukumele phezulu udaba ngoba akezwani nabantu abahlukumeza izingane, ufuna zifunde endaweni ephephile,” kusho uMahlambi.
Uthe othisha bamisiwe ukuze kuqhutshwe uphenyo ezikoleni ezehlukene nokuthi uma seluphothuliwe kucace ukuthi kwenzekani ngabo.
Uphinde wakugcizelela ukuthi umisiwe nothisha obonakale ebhaxabula umfundi waxwayisa bonke abasebenzisa induku ukuthi bazothathelwa izinyathelo zomthetho.
Izenzo zokushaywa kwabafundi ziphinde zagxekwa nguSihlalo wekomidi lezemfundo ePhalamende, uNksz Lungelwa Zwane, othe bazoluqapha ngeso lokhozi uphenyo lothisha abamiselwe ukuhlukumeza izingane.
Uthe uthisha waseMdlamfe Secondary kufanele ajeziswe ngoba induku yavalwa eminyakeni ewu-20 edlule.
“Sikhathazekile ngezenzo zokuhlukunyezwa kwabafundi beshaywa nesikuzwayo ukuthi bahlukunyezwa ngokocansi ezikoleni zaKwaZulu-Natal. Siyajabula ukuthi bamisiwe ngoba abakwenzayo kuphambene nomthetho,” kusho uNksz Zwane.
UNksz Thirona Moodley, wenyunyana yothisha iNaptosa, uthe othisha abashaya izingane baphinde bazidlwengule kufanele baxoshwe ngoba bashiya izingane zinesilonda esingapholi emphefumulweni.
Uthe akuwona umsebenzi kathishomkhulu ukuqondisa ubugwegwe kothisha abashaya izingane kodwa kufanele owenza lo mkhuba abikwe emaphoyiseni.
“Kufanele ungqongqoshe wezeMfundo abize ingqunquthela yokukhumbuza othisha indlela yokuziphatha. Othisha abashaya abafundi baphinde balale nabo kufanele baboshwe. Sekuyisikhathi sokuthi sibathathele izinyathelo,” kusho uNksz Moodley.
UNksz Mila Kakaza, wenhlangano elwela amalungelo abafundi, i-Equal Education, uthe othisha abahlukumeza abafundi kufanele baphucwe iziqu zabo yiSouth African Education Council for Educators (SACE) ukuze kuqedwe ukuhlukunyezwa kwabafundi.
Ugqugquzele abazali ukuthi babike emaphoyiseni ngokuhlukunyezwa kwezingane zabo nomnyango ujezise abanecala.
Bheka nasekhasini 12.